Bit By Bit - Misa kubatsirana - 5.2 Human computation
Human computation zvirongwa tora idambudziko guru; kuiputsa kupinda nyore zvidimbu; kuvabudisa kuti vashandi vazhinji; uye ipapo uwandu hwezvinhu zvose zvabatanidzwa. zvabuda.
Human computation mabasa nokubatanidza kuitwa nevanhu vakawanda kushanda nyore Micro-mabasa kuitira kugadzirisa matambudziko vari impossibly guru kuti mumwe munhu. Unogona kuva dambudziko tsvakurudzo akakodzera computation dzevanhu kana waita wambofungidzira: Ini aizogadzirisa dambudziko iri kana ndaiva chiuru tsvakurudzo vabatsiri.
The prototypical muenzaniso computation kwevanhu chirongwa ndiye Galaxy Zoo, izvo Ndinenge hunonyatsodonongodza pazasi. Basa iri, vanopfuura 100,000 vakazvipira of mifananidzo inenge 1.000.000 enyeredzi zvakafanana rakarurama kwokutanga-uye substantially duku-kuitwa kubudikidza vanoongorora nyeredzi kwenyanzvi. Izvi zvakawedzera chikero inopiwa vakawanda kutsigirana zvinotungamirira zvinhu zvitsva sei mapoka enyeredzi anoumba, uye pakashandurwa boka zvachose itsva enyeredzi anonzi "Green Peas."
Kunyange zvazvo Galaxy Zoo angaita kure evanhu tsvakurudzo, pane mamiriro ezvinhu chaizvoizvo zhinji apo Vatsvakurudzi munzanga vanoda code, patsanura, kana chitaridzi zvifananidzo kana magwaro. Mune zvimwe zviitiko, Kuongororwa ichi inogona kuitwa makombiyuta, asi kuchine mamwe Ongororo dziri nesimba makombiyuta asi nyore vanhu. Zviri nyore-for-vanhu ava asi nesimba-nokuti-makombiyuta Micro-mabasa kuti tinogona kwidibira vanhu computation zvirongwa.
Kwete chete ndiyo Micro-basa muna Galaxy Zoo chaizvo mukuru, chimiro chirongwa vakawanda uyewo. Renyeredzi Zoo, uye vamwe vanhu computation zvirongwa shandisa aparadzane-kushandisa-sangana nzira (Wickham 2011) , uye kamwe unonzwisisa nzira iyi uchazonakidzwa kurishandisa kugadzirisa mijenya matambudziko. Chokutanga, dambudziko guru riri rwakakamukana mijenya zvishoma dambudziko akakora. Zvadaro, basa kwevanhu rinoshandisirwa mumwe shoma dambudziko bimvu, pasina vamwe akakora. Pakupedzisira, migumisiro basa iri ikashandiswa kubudisa tabvumirana mushonga. Sezvo mamiriro, ngationei kuti aparadzane-kushandisa-sangana nzira yaishandiswa Galaxy Zoo.